Sivana labozia tsara indrindra ho an'ny mpamokatra andalana sarimihetsika BOPP | Manfre
Ny sivana labozia dia be mpampiasa amin'ny extensioner ny tsipika Bruckner Bopp
Misy karazany roa ny sivana (ny iray an'ny Main Extruder ho toy ny rafitra Candle Filter, ary ny iray ho an'ny Coextruders)
Ny habe iraisana dia 49.1 × 703.5MM. LAYER LG / 2. + Ivelany ivelany sosona 52x714MM
Ny BOPP dia ny fanafohezana ny "BiaxIAL oriented Polypropylene", ny sarimihetsika BOPP dia sarimihetsika polypropylene miorina amin'ny biaxial oriented.
Amin'ny famokarana horonantsary BOPP, ny fihenan'ny polypropylene molekiola avo dia voalohany natao ho ravina na sarimihetsika matevina amin'ny alàlan'ny lohan'ny milina lava sy tery, ary avy eo amin'ny milina manenjana manokana, amin'ny mari-pana iray sy ny hafainganam-pandeha napetraka, miaraka na dingana tsikelikely Ny sarimihetsika dia mivelatra amin'ny lalana roa mitsivalana (longitudinal and transverse), ary aorian'ny fihenan-tsakafo na fitsaboana hafanana na fanodinana manokana (toy ny corona, coating, sns.).
Ny sarimihetsika BOPP mahazatra ampiasaina dia misy: sarimihetsika polypropylene miorina amin'ny biaxial, sarimihetsika polypropylene miorina amin'ny biaxial, sarimihetsika fonosana sigara, sarimihetsika polypropylene polypropylene miorina amin'ny biaxial, sarimihetsika metaly vita amin'ny polypropylene miorina amin'ny biaxial, sarimihetsika mifangaro, sns.
Ny sarimihetsika BOPP dia fitaovana famonosana tena ilaina tokoa. Ny sarimihetsika BOPP dia tsy misy loko, tsy misy fofona, tsy misy fofona, tsy misy poizina, ary manana tanjaka avo, hery miantra, henjana, henjana ary mangarahara tsara.
Ny angovo ambonin'ny sarimihetsika BOPP dia ambany, ary ny fitsaboana corona dia ilaina alohan'ny hametahana na fanontana. Aorian'ny fitsaboana corona, ny sarimihetsika BOPP dia manana fahaiza-manao fanontana tsara ary azo atao pirinty mba hahazoana endrika mahafinaritra, noho izany dia matetika ampiasaina ho toy ny sosona ambonin'ilay sarimihetsika mitambatra.
Ny takelaka sivana dia ampahany lehibe amin'ny extruder, ary ny vokatra azo ekena ihany no azo vokarina amin'ny alàlan'ny efijery sivana. Ny efijery fanivanana extruder dia ampiasaina amin'ny filtration sy ny fampifangaroana ireo fitaovana viscous isan-karazany toy ny plastika, kofehy simika, fingotra, adhesives miempo mafana, adhesives, material coating, ary fifangaroana. Ny efijery sivana extruder dia manana karazana harato. Miaraka amin'ny karazana fehikibo, ny extruder dia afaka manolo ny efijery sivana tsy manelingelina ny famokarana amin'ny alàlan'ny mpanova efijery mandeha ho azy, mamonjy asa sy fotoana, milamina ny fahombiazan'ny vokatra, mahatsapa ny fiovan'ny efijery mandeha ho azy sy ny fandidiana maimaim-poana, mampitombo ny fotoana fanivanana mahomby ary mampihena ny vidin'ny famokarana .
Teo aloha: Cartridge sivana rivotra ho an'ny rafitra fidiran'ny rivotra
Manaraka: Sivan'ny polymer ho an'ny fizotran-javatra